विवादमा मुछिए पुष्कल शर्मा, फेरि अर्को विवादित गीत बजारमा -::DainikPatra
विवादमा मुछिए पुष्कल शर्मा, फेरि अर्को विवादित गीत बजारमा
बुटवल । गायक पुष्कल शर्मा निराशावादी र विछोडका गीतहरु लेख्दै, गाउँदै आएका गायकहरुमा पर्छन । अरुभन्दा ‘युनिक’ हुन मन पराउने पुष्कल शर्माले केहीवर्षअघि ‘मेरो आयु छोटो छ रे’ भन्ने गीत निकालेका थिए । यसअघि ‘कालीगंगा’ गीतको भिडियोमा चित्तामै चढेको अभिनय गरेका थिए ।
अहिले मुटु जलाई–जलाई भाग ३ को ‘मलामी’ बोलको गीत भिडियोसँगै यहि शुक्रबार नै सार्वजनिक गरे । आफू मरेपछि के होला ? भन्ने सोचेर सोहि अनुसार भिडियो तयार पारे । तर यो भिडीयो हेर्नेहरुलाई यस्तो लाग्छकी सवै भिडीयो हेर्नभन्दा पहिलानै भावुक वनाउँछ अथवा जिव्रो टोक्न वाध्य वनाउँछ । यो गित रिलीज भएको केही घण्टावाटै गायक पुष्कल शर्मालाई समवेदना दिनेहरुको भिड लाग्यो यति मात्रै हैन केही अनलाईनहरुले यसको वारेमा समाचार पनि वनाए । कुनै गित जस्तो नभै यो निकै फरक ढगंको मृत्यु वारे पुष्कल शर्माको वारेमा तयार पारीएको रिपोर्ट जस्तो छ, जस्ले गर्दा गित पुरा हेर्दासम्म पनि मान्छे पुष्कल शर्माको मृत्यु भएको अड्कन काट्न सक्छन् ।
अर्को कुरा यो मृत्यु हो भन्ने दर्शकलाई भ्रम पार्न रेडियो नेपालकी समाचार वाचीका कोमल वोलीले टिभी कार्यक्रमवाट सवै कुरा भनिरहेकी हुन्छीन भने मृत्युअघि पुष्कल कस्ता थिए भन्ने वारेमा चर्चित लोक गायकहरुलेनै ज्युदै श्रद्धान्जली दिदै आफ्नो रियल भनाई राखिरहेका छन् ।
पुष्कलको यो गित हेर्ने र सुन्नेहरुले तथा केही मिडीयामा मृत्युको वारेमा आएको खवर थाहा भएपछि धेरैले चिन्ता व्यक्त गरेपछि अन्त्यमा पुष्कलले स्पष्टीकरण दिदै माफी समेत मागेका छन् । उनले फेसवुक वालमा पोष्ट गर्दै सवै श्रोता दर्शकप्रति क्षमा याचना गरेका छन् । आफुले गित हिट वनाउन नभै एउटा काल्पनीक गित वनाउँदा यस्तो भ्रम गएको समेत वताएका छन् ।
गायक शर्माले यो गित रिलीज गरेपछि फोन नलाग्ने ठाउँ पाल्पाको अर्गलीमा थिए । त्यतिवेला देशविदेश र जताततैवाट पुस्कलको मृत्यु भन्ने हल्ला फैलीएपछि फेसबुकमार्फत स्पष्ट पार्दै सपनामा सम्झिएको रुपमा भिडियो तयार पारेको प्रष्टोक्ति दिएका थिए ।
उनले दर्शक श्रोताको यस्तो मन दुख्ने महसुस नगरेको भन्दै यसले पर्न गएको चोटप्रति क्षमायाचना पनि गरेका छन् । लाईभ शोमा पनि फिमेल मोडलसँग नाटक गर्दै प्रस्तुति दिने पुष्कलले नाटक नै गरेका थिए । उनले आफूले हिट हुने उद्देश्यले यो हर्कत नगरेको फेसबुकमा भनेका छन् । यद्यपी उनलाई दैनिकपत्रले धेरैपटक फोन सम्पर्क गर्दा उनले फोन उठाएनन् ।
दर्शक श्रोता झुक्किने मुख्य कारण नै ख्यातिप्राप्त कलाकार तथा समाचारवाचिका कोमल वलीले पुष्कलको जीवनी भन्दै कार्यक्रम चलाईरहेकी छिन् । पुरुषोत्तम न्यौपाने, रमेश विजी, खड्ग गर्बुजा, कुलेन्द्र बिक र राजु ढकाल जस्ता चर्चित सर्जक गायकले पुष्कल शर्माजस्ता मान्छेको निधनले लोक संगीत क्षेत्रमा अपुरणीय क्षति पुगेको भिडियोमा भनेका छन् । यसले पनि यति ठुला ‘गायक’ हरुले ‘नायक’ जस्तो अभिनय गरेपछि भ्रममा परेका हुन् ।
अनलाईनमा आएका प्रचारबाजी र भिडियो अन्त्यसम्म नहेरी नबुझिने भएकाले यसलाई पुष्कलले हिट हुने रणनीति वा फरकपन देखाउने उद्देश्य हुनसक्छ । उनकै नामको युट्युब अकाउण्टबाट हालिएको सो भिडिया हेरेपछि अधिकांशले साँच्चै ठानेर श्रद्धान्जली दिएका छन्, त्रसित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् भने धेरैले पुष्कललाई कडा शव्दमा गाली पनि गरेका छन् ।
मान्छे मृत्युसँग डराउँछ तर भिडियोहरुमा आफै बाँसको घारोमा कसिएर चितामा बस्ने पुष्कलले श्रोता र दर्शकलाई समेत डराउने बनाए । दिनभर उनको फेसबुक, उनका साथीहरुको मोबाईलले फुर्सद थिएन । यसलाई शर्माले कसरी लिएका छन्, उनै जानुन् तर पुष्कलले मृत्युपछि पाउने श्रद्धाञ्जली जिउँदै छँदा पाए ।
उनले भिडियोमा त नाटक गर्न लगाएर मात्र आफूप्रति शुभेच्छा प्राप्त गरेका थिए । वास्तविक, दर्शक श्रोताले मृत्यु जस्तो एक पटक हुने कुरालाई खेलाँची गरेकोमा राम्रो भने पक्कै भनेका छैनन् ।
यो हिट हुने मेसोमा कसलाई कति फाईदा ? बेफाईदा हुने हो ? हेर्न बाँकी नै छ । पुष्कलले मलामी बन्न साथी डाँकिरहँदा कतै मलामी नै घटाएनन् ?
मृत्युपछिको कल्पना गर्ने पुष्कललाई नै थाहा होला । तर धेरैले पुष्कलले माफी माग्नुपर्ने र यो गितलाई युट्यववाट हटाई अरु फेरवदन गर्न समेत माग गरेका छन् ।
गायक पुष्कल शर्माको यो गितको भिडीयो निर्माणमा केही गम्भिर लापरवाही भने देखिएको छ । पुष्कल शर्माले यसअघिको आफ्नो प्रतिष्ठा यहि गितपछि अलिकति घटाएको समेत सहजै रुपमा महसुस गरिएको छ । त्यसो त गायक शर्माले यसअघि पनि त्यस्तै खालका गित ल्याएका थिए । कहिले गालीगण्डकीमा हाम फाल्ने त कहिले झुण्डिएर मरे जस्ता गित ल्याएका पुष्कलले निरन्तर यस्ता खालका गित ल्याईरहेका छन्, यसको अर्थ र गितले दिने सन्देश के होला त्यो पाठक र श्रोताल सहजै रुपमा वुझीरहेका छन् ।
निरन्तर यो भिडीयो युट्यववाट हटाई अर्को भिडीयो पोष्ट गर्न दवाव आएपछि अव पुष्कल शर्माले के गर्लान त्यो उनैले जानुन, तर संगितविज्ञहरुले भने यस क्षेत्रमा स्पष्ट कानुनको अभावमा जस्ले जे गरेपनि हुने भएको छ, यसले भविष्यमा निकै नराम्रो गर्ने संकेत गर्दछ ।
[भिडीयो हामीले हाम्रा पाठकलाई देखाउन नसक्ने भएकाले पोष्ट गर्न असहमर्थ भएका छौं, धन्यवाद्, संः ]
मिस वेस्टन नेपालमा १५ जना युवती
मिस बुटवल नेपाल हुँदै
दैनिक पत्र संवाददाता /बिहिबार, कार्तिक १५, २०७५
कलाकार बिनोद पाण्डेकाे तीज गीत ‘गर्भ पतन’ बजारमा
दैनिक पत्र संवाददाता /बुधबार, साउन २३, २०७५
दैनिक पत्र संवाददाता /मङ्लबार, चैत्र १३, २०७४
दैनिक पत्र संवाददाता /सोमवार, चैत्र १२, २०७४